BAREFOOT...!!!: प्रकृति सङ्गै थवाङ ((तस्वीरहरु)
प्रकृति सङ्गै थवाङ ((तस्वीरहरु)
६२ सालमा रोल्पाको लिवाङ जाँदा सपनामा पनि सोचिएको थिएन कि कुनै दिन रोल्पाको माथिल्लो लेकहरुमा जुनेली रातमा "गरुँ कि मीठो भूल" सुसेल्दै थवाङ जाने दिन आउला, त्यो पनि आठ बर्षमै । तर त्यो दिन आयो ।
संकटकालका बखत रोल्पा जाँदा लिवाङ कुनै किल्लाजस्तो थियो, चारैतिरबाट बेस्सरी तारबारले घेरेर ब्यारिकेड गरिएको । मानब अधिकार आयोगबाट गएको भए पनि मैले सदरमुकाम पारीका गाउतिर समेत जान्छु भनेर सोच्ने आँट गरिन, को पङ्गा लेओस् ।
SunRise from MayaKharka, Thawang
थवाङका बारे धेरै मिथहरु थिए बजारमा । ३६ सालमै बहुदल निर्दल चुनावमा एक भोट् पनि नखसेपछि सेनाले कार्वाही गरेको, क्रान्तिकारी बर्मन बुढाको गाउँ, पुरै गाउँ माओवादीको होल टाइमर भएको आदि आदि ।
तर यस् पटक संबिधानसभा निर्वाचनको अनुगमनमा पुन: रोल्पा र प्युठान जिल्लामा खटीइने भैयो, वीरबहादुर सर र मेरो टोली । मनमनै सोचें, यो पटक थवाङ पुगिन्छ जसरी भएपनि । नेपालगंजमा हरी ग्यवाली दाईले पुग्न सकिन्न जस्तो कुरा गरे, तैपनी सोचियो, जसरी नि गैन्छ । कार्तिकको २८ गते प्युठानको काम सकाएर लिवाङतिर लाग्दा बिजुवार बजारमै रात परेको थियो । एकदिन लिवाङमा काम सकेर थवाङ हिंड्ने हुटहुटीले अँध्यारोमा पनि हिंडियो बोलेरोमा । सडक सुनसान र रित्तो थियो । कतै-कतै नेकपा माओवादीका जाँचकीहरुले रोक्थे र जान दिन्थे । सुलीचौरमाथिको मिझिङ बजारबाट अलिकमाथि वनमा गएपछि गाडी कसैले बाटोमा राखिदिएको किलामा पर्‍यो, अगाडिको दुइटै टायर् स्वाहा । रातिको ९ बजे आपत भो । गुरुजीले बिहान बिरालोले बाटो काट्दा मैले जबर्जस्ती जाउँ, केही हुन्न भनेको थें । उन्को बिरालो मिठा सत्य भयो, त्यस्पछी त पुरै यात्राभरी उन्को बिरालो पुराण जारी रह्यो । एउटा त स्पेयर थियो, फेरीयो । लिवाङ मनिराम थापालाई फोन गरेर रेस्क्यु गाडी मगाइयो । थापाजीको टिम नपुगुन्जेल ल्याप्टपमा 'शोले' एकपटक फेरी हेरियो । १० बजे लिवाङ पुगियो बल्ल-बल्ल ।
Meet Merina BudhaMagar from Thawang
भोलीपल्ट एक राउन्ड भेटघाट सकेर थवाङ हिंड्ने तयारी भयो । धेरैले तिमीहरु थवाङ त पुग्दैनौ होला भने ।
मङ्शीर १ गते बिहान ७ बजेतिर लिवाङबाट निस्क्यौं, जाडो थियो तर मौसम खुलेकाले एकदमै रमाइलो । हिमालहरु मुडमा देखिन्थे । सुलीचौर पुगेर फेरी एक राउन्ड भेटघाटपछि सवा दस् तिर बल्ल हाम्रो गाडी हिंड्यो । फुलीवनसम्म गाडी जाने भएकोले त्यता लागियो । बाटोमा बाटो भुलिएर जेलवाङतिरको बाटो अलिक पर पुगेपछि गाडी फर्काएर फेरी फुलीवनतिर लागियो । फुलीवन पुग्दा नै १ बजेको थियो । निर्वाचन गराउन हिंडेका टोलीहरु पनि भेटिए बाटोमा । फुलीवनमा खाना खाएर गाडी चाँही फर्काइदियौं, र हिंडेर उवा गाविसतिर लागियो ।
Looks So much Communist
शहरको जीवनशैलीले हिंड्ने बेलामा दिमाग खराब गर्छ । खासै हिंड्न सकिएन । उवा गाविसको एउटा गाउँमा संघीय समाजवादीका उम्मेद्वार नवीन रोका भेटिए, उनिसङ्गै काङ्ग्रेसका प्रचारक र छेवैमा निर्वाचन प्रचार र उम्मेद्वार निषेधित क्षेत्रको ब्यानर राखेर बसेका नेकपा-माओवादीका साथीहरु पनि भेटिए । बाहिर जे पनि हामी चुनाव गराउने र छेक्ने मिलेर हिंडेकाछौं भनेर रमाइलो पनि गरे । साथै तपाईंहरु थवाङ पुग्नुहुन्न भनेर ठोकुवा समेत गरिदिए ।
मतपेटिका तोडफोडको ब्यानर बर्मन बुढाको घरमा
त्यसपछिको हिंडाइ एकतमाशको भयो । दुईजना साथीहरु देशको सामाजिक राजनीतिक सामाजिक बिषयमा गरमागरम बहश गर्दैथिए । मलाई राजनीती सम्झिन समेत मन थिएन । बाटोमा सुन्दर पहाडहरु थिए, पानी बगिरहेका खोला, हरियो वन, बेलाबेला झुल्किने ढुङ्गाले छाएका घरहरु भएका गाउँ र उकालो तर राम्रो बाटो । हिंड्न मजा भैरहेको थियो । रोल्पाका गाउँगाउँमा लघु जलबिद्युतमार्फत बिजुली पुगेछ । काठमान्डुमा जता फर्केर फोटो खिच्न खोजे पनि बिजुलीको तार आउँछ, रोल्पाका गाउँहरु पनि त्यस्तै हुन लागेछन् । नेपालका पहाडहरु घुम्नको लागि सुन्दर हुन्छन्, जता गए पनि रमाइलो । बस्नका लागि चाँही ठाउँअनुसारको सुख र दु:ख हुन्छ । फुलीवन भन्दा यतापट्टीको भीरले गर्दा सडक लान नसकिएकोले यस् गाउँको दु:ख चाँही यातायात हो जस्तो देखिन्थ्यो । खच्चरबाट या भारी बोकेर सामान ओसार्नुपर्ने बाध्यता अझै रहेछ त्यहाँ ।
Blessing memories of Rolpa
हिंड्दा हिंड्दै रात पर्‍यो, हामी पहिले थवाङ नै पुग्ने भनेर बतासिएका थियौं, उवाको प्रहरी चौकीबाट अगाडि लागेपछि जोश आधा भयो । पछि त भोक लागेर लखतरान भैयो । बाटोमा एउटा पसल भेटियो, तर पसले थिएनन् । अर्को एउटा चिया पसलमा चिया खाँदा खाँदै रात पर्‍यो । हामी चाँही माथि डाँडा सम्म जसरी भए पनि पुग्ने भनेर हिंड्यौं । टर्च थिएन, मोबाइलको उज्यालोमा हिंडियो खोंचजति । देख्नलाई यहीं पल्लोपट्टी देखिने बाटो कता कता अंध्यारो खोंचमा पस्थ्यो र फेरी निस्किन्थ्यो जूनको उजेलोमा । जूनको उज्यालोमा हिंड्न चाँही साह्रै मज्जा आउने । चिसो हावा चलिरहेको थियो । उभियो कि काम फोन झिकेर फोनमा टावर खोज्ने हुन्थ्यो । कहीं कतै देखा परेन टावर ।
वालपेन्टिङ पो गर्न नपाईने, रोडपेन्टिङ नपाईने भन्ने छ ? :P
बल्ल बल्ल थवाङ गाविस १ मायाखर्क पुगियो राती ८ बजे । खास नाम मागेखर्क भएपनी रिमिक्स भएर मायाखार्क भएको रहेछ । खर्क माथि भएपनी होटेल चाँही तलै रहेछ धन्न । दीपनारायण साहुजी भात खाइसकेर सुत्नै लागेका थिए । हामीले फेरी दु:ख दियौं । उन्ले भात, तरकारी र दाल पकाइदिए । तरकारी के थियो मैले चिनिन, भोक लागेकोले बेस्सरी खाइयो । सुत्ने ब्यबस्था माथिल्लो तलामा थियो । सिरानी अप्ठेरो, चिसो लागेर दुखेको घाँटीले सकस त छँदैथ्यो, त्यसमाथि ओढ्नेले आपत गरायो । टाउको छोपे खुट्टा बाहिरा निस्किने, खुट्टा छोपे टाउको रित्तै । त्यसमाथि राम्ररी पसारे खुट्टा भर्र्याङ्मा झुन्डिने । साह्रै कष्टले रात काटियो । मुस्किलले दुईपटक निदाइयो होला ।
Way to Liwang, Rolpa
बिहानै छ बजे साहुजीलाई चिया पकाउन लगाएर खाएर फेरी हिंडियो । नजिकै देखिएको डाँडोको टुप्पोमा पुग्न फेरी अर्को डेढ घण्टा लाग्यो । डाँडो कटेपछि थवाङतिरको चिसो हावाले स्पर्श गर्‍यो । क्या छिटो आइयो जस्तो लाग्यो ।
थवाङपट्टीको भाग साह्रै रमाइलो थियो । सुन्दर जङ्गल, खोलाहरु, मिलेको बाटो र टाढा देखिने सिस्ने हिमालको लहर । बाटोमा बनाइएका स्मारक र देखिने गाउँहरु । हामीले फेरी बाटो भुलेर फिन्टिवाङ गाउँतिर छिरेछौं । थवाङ आइपुग्यो, यही हुनुपर्छ भनेर सोचेको, के खाएर हुनु ? जस्ला सोधे पनि दुई घण्टाबाट घट्दैनन् । केही नखाइ हिंडेकोले भोक लागेर फेरी रिङ्गटा चल्न थाल्यो । तल खोलामा झर्थ्यो, फेरी उक्लिन्थ्यो, फेरी झर्थ्यो ,बाटोले पनि दिमाग खराब गर्‍यो । दुई घण्टामा थवाङ पुग्न जोसिएको टिमले फेरी ४ घण्टा लगायो ।
Way To Fuleewan and Jelwang, Rolpa
थवाङ ठुलो गाउँ देखिएपछि अलिकती जोश आयो । एउटा दाँया बाँया र अगाडि तिनैतिर खोलाले घेरिएको टापूजस्तो गाउँ अगाडि थ्यो । ढुङ्गाले छाएका गुजुमुज्ज परेका घरहरु उत्तर कोरियाको डकुमेन्ट्रीमा देखाइने कम्युनजस्ता देखिन्थे । गाउँ प्रवेशदेखि जताततै निर्वाचन विरोधी ब्यानर र वाल पेन्टिङहरु देखिन्थे । एउटा पसल भेटियो, मैले एउटा हाअफ लिटरको कोक र एउटा बिस्कुट सिनित्त पारें । बल्ल अलि सास आएजस्तो भयो ।
बर्मन बुढाको घर अगाडि होटेलमा बसेर ३ जना मिलेर २० वटा जति पुरी र १५ वटा जति जेरी सकाइयो र भात अर्डर गरियो । अनि गाउँ घुम्न निस्क्यौं ।
फुलीवन छेउको भीर अगाडि
मैले यो जत्तिको ब्यबस्थित गाउँ देखेको थिइन अहिलेसम्म । पुरै गाउँभरीबाटोमा ढुङ्गा छापिएको थियो, ढल ब्यबस्था गरिएको थियो । गाउँमा IME को शाखा, फाइनान्स, राम्रो स्वास्थ्य चौकी, हेलिप्याड, डिजिटल कलर ल्याब, प्लस टु स्कुल, सभा गर्ने स्थान, बिएड पढाई हुने क्याम्पस र पुलिस चौकी पनि थिए । सबैको घरमा राम्रो बिजुलीबत्ती र सोलार समेत छ । केहीले डिशहोम समेत राखेका छन् । फोनको चाँही समस्या, स्काइ सिडिएमए बाहेक कुनै नचल्ने । सडकबाट चाँही टाढा रहेछ थवाङ, रुकुमपट्टिबाट पनि टाढा, रोल्पापट्टिबाट पनि टाढा । त्यसैले यहाँको पनि यातायातको साधन घोडा खच्चडहरु हुन् । हामी आएको थाहा पाएर पुलिसहरु हामीलाई भेट्न आए । पुलिसहरु थवाङको पोस्टिङ्बाट खुशी देखिन्थे । यहाँ जति सहयोगी जनता कहीं छैनन् भनेर सुनाए ।
Nepal looks so very beautiful
होटेलवाल्नी दिदीले द्वन्द्वको बारेमा सुनाइन्, संकटकालका समयमा पुरै गाउँ माओवादीको होलटाइमर भएको र सेना आउँदा सबै गाउँ छोडेर भाग्ने गरेको सुनाइन् । उन्का छोराछोरी दाङ पढ्दा रहेछन् । कुरैकुरामा प्रचन्डको नाम निस्केपछि बेस्सरी रिसाइन् र प्रचन्डलाई एकलख लगाएर गाली गरिन् । युद्दकालमा थवाङलाई राजधानी बनाउछु भनेका रहेछन् प्रचन्डले, पछि सम्झाउँदा यो गाउँ अलिक कुनामा पर्छ भन्दिएछन् । थवाङवासीहरुका नजरमा प्रचन्ड सबैभन्दा ठुला भिलेनजस्ता देखिए । थवाङबासीहरुले थवाङमै जन्मेर उपचुनाबमा प्रचन्डको स्थानमा रोल्पा २ बाट सभासद भएका सन्तोष बुढामगरको खुब प्रसंशा गर्दा रहेछन् । द्वन्द्वकालमा सेनाले घर भत्काइदिएका सन्तोषको सभासद हुँदा समेत आफ्नो घर छैन, उन्को परिवार अहिले पनि स्थानीय पार्टीबाट थवाङमै सन्चालित कम्युनमा बस्छन् । होटेलवाल्नी दिदिले प्रष्ट शब्दमा "नेता भनेको यस्तो हुनुपर्छ" भनिन् ।
Liwang Bazar, Rolpa
थवाङको एक आपसको आत्मियता गजब लाग्यो । दिनमा दशौं पटक भेट हुने मान्छेसङ्ग पनि हाँसेर बोल्ने र एकजना बिरामी हुँदा सबै मिलेर अस्पताल लाने गर्दा रहेछन् । शान्त स्वभाव, गीत गाएजस्तो मीठो बोल्नेशैली र नहतारीकन काम गर्ने तरीका गजब लागे । अझ देशैभरी मतदान कर्मचारी र मतदान प्रकृयालाई अवरोध गरिएको बेला थवाङमा त ढिम्किन नि दिएनन् होला भन्ने हाम्रो अनुमान थियो, तर त्यहा त मतदान कर्मचारीहरुको खाने बस्ने ब्यबस्था मिलाउने मात्र होइन, मतदान केन्द्र बनाउने काममा समेत सघाएकाले मतदान कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु मक्ख रहेछन् । यो अचम्मको बिरोधको शैली देखेर दङ्ग परियो, सबै सहयोग गर्ने, मतदान केन्द्र समेत बनाइदिने, तर भोट् हाल्न चाँही ज्यान गए नजाने । थवाङमा कुनै उम्मेद्वार भोट् माग्नसमेत जान सक्नेनन्, एनेकपा माओवादीकी ओनसरी घर्तीमगरले बाहिरबाट लागेका धेरै र केही वरिपरीका मान्छे राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दा झगडा समेत भयो रे ।
Life in Rolpa
साथीहरुले सुङ्गुरको मासु र भात खाए, म शाकाहारी भएकोले तरकारी र भात खाएँ । खानेबेला जापानबाट आएर डेढ महिनादेखि थवाङमै बसिरहेका जापानिज भेट भए । खाना खाएर हामी मतदान केन्द्रतिर लाग्यौं ।
गाउँको छेउमा कम्युनिष्टहरुको परिचित शैलीमा "विश्वका मजदूरहरु एक हौं" भन्ने वालपेन्टिङ बनाइएको रहेछ, मार्क्स एङ्गेल्स लेनिन स्टालिन र माओको तश्वीर सहित । झोलुङ्गे पुलको पारीपट्टी रुकुमबाट अम्बा बेच्न आएकी बहिनीसङ्ग अंबा किनेर खाइयो । यो एरियाको सेन्टर नै रहेछ थवाङ । तल क्याम्पस, बीचमा स्वास्थ्य चौकी र हेलिप्याड अनि माथि स्कुल र सङ्गै हावा खाने ठाउँहरु । सबैभन्दा अचम्म चाँही त्यो हावामहलवाला पाखोमा नेपाल टेलिकम जिएसएमको टावर टिप्ने रहेछ । यता र उता दगुर्दै घर फोन गरियो । ३ बजेतिर फेरी थवाङ छोडेर हिंडियो ।
फर्किंदा खोलामा बाटो हराइयो । म गीतको तालमा पछि पछि साथीहरु आइराखेका होलान् भनेर हिंडे, फर्केर हेर्छु त छैनन् । बिहान बाटो हराएकोले जान्ने भएर अर्को बाटो गएँ । म पनि हराएँ, साथी पनि भेटिन । जाँदा जाँदै साह्रै दाँया गएसी एकजना दाईलाई सोधेको म त बेस्सरी उल्टो पो आएछु । बारी बारी हाम्फाल्दै कुकुरले खेदिंदै बल्ल सही बाटोमा आएँ । एउटा खोला, फेरी अर्को खोला, फेरी अर्को खोला, सबै उस्तै, घुम्दा घुम्दै बेस्सरी थाकियो । साथीहरु भेट्टाउन जोडले कुदें । माथि टुप्पामा पुगेपछि एकजना दिदिलाई सोधेको गएका छैनन् भनिन् । अनी कुर्दै कुर्दै रात परेपछि बाटोमा भेटिएका पुर्व सभासद सन्तोष बुढालाई म गैसकें भन्दिनु भनेर फेरी मायाखर्कको होटेलतिर कुदें ।
एक घण्टापछि साथीहरु आए, उनिहरु मलाई खोज्दै तल्तिर झरेछन्, अनि दुई जना फेरी हराएछन् । फोनले काम नगर्ने बोलाए नसुन्ने । त्यो दिन मायाखर्ककै होटेलमा फेरी बसेर भोलिपल्ट १ बजे फुलीवन झरियो ।
तीन दिन लगाएर थवाङ घुमियो, घुमियो के भन्नु भ्रमण् आगो माग्न गएको जस्तै भो । तर पनि फर्किंदा नेपालका सबै गाउँहरु यस्तै बिकसित, यस्तै मिलेका र यस्तै एकजुट भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने जोडदार इच्छा रह्यो । यति राम्रो गाउँमा सडक पुगे कति राम्रो होला जस्तो लाग्यो तर सडक पुगे यो गाउँ यत्तिकै सुन्दर नरहला जस्तो लाग्यो । समग्रमा रोल्पा नै शान्तिप्रिय भएको छ, जम्माजम्मी १४०० जना युद्दका दौरानमा गुमाएको रोल्पामा "शहिद" नभएका गाविस र गाउँ बिरलै भेटिन्छन् । तैपनी सबै राजनीतिक आस्था र पेशाका मान्छे फेरी मिलेर बस्न थालेको देखेर खुशी लागेको छ । जे होस् थवाङ र रोल्पाले राम्ररी 'इम्प्रेस' गरेको छ ।
(२०७० मङ्शीर १५ गतेको अन्नपूर्ण शनिबारमा प्रकासित !)
Watching Hindi movie Sholay yet again and Waiting for Rescue
Culture of Rolpa
I look likeafilmstar! Ain't I? ;)
बत्ती आउने भएर होला, घाम लाग्दै बत्ती बालेर छोड्दिने ! :)
Running down to thawang!
Corn Storage at Thawang
She looks like dancing! A girl from Thawang watches us! :)
A local fellow teaching his son to play Madal, Thawang
A local village at Thawang
छोरोलाई घोडामा राखेर घोडा चराउन जाँदै
थवाङको बहुचर्चित ठुलो गाउँ main village of Thawang
Entrance says " Election Campaign restricted Area"
IME agent at Thawang
Thawang looks well managed
It reads no election at Thawang
Finance of Thawang
Health post at Thawang
Helipad and college at Thawang
Sisne Mountain viewd from Thawang
Into the wood! Way on the go!!
Nature at the way, Rolpa
UCPN Maoist on tree, in funny way Nepali congress! :)
Rolpali kids watches us pass by!
Labels: society, Thawang, Travel
bhuwan pokharel December 1, 2013 at 5:02 PM
साह्रै गजब लाग्यो ! एकछिनलाई रोल्पा पुगियो !
Samrat Babu Koirala February 4, 2014 at 2:12 AM
Ekendra February 25, 2014 at 9:52 AM
milan February 25, 2014 at 3:12 PM
Great snaps bro